Qala ukulondolozwa Umlilo kwi-pollin
27. Meyi 2018
Umlilo omkhulu waphuma kwindawo yokulahlwa kwindawo yaseZgierz, iikhilomitha ze-100 ezivela eWarsaw. Amakhulu ama-firemen asebenzayo. Umlilo awusekho phantsi kolawulo, kubikiwe Radio Lodz, Uqikelelo lwe-50.000 t engcolileyo.
Yilapho udoti lweentlanga ezikhuphisayo zitshisa inkunkuma yazo ePoland xa zitshisa xa iChina ayisayi kwamkela inkunkuma kuloo ntwasahlobo. Into enje into enokuthi ibe yinto ecacileyo Iingxowa ezimnyamaukubona kwiindawo zokutshisa umhlaba.
Ngaba imigaqo yokupakisha iphinda igule iifestile okanye yinyani ukuba imfucuza ayikho nje ngoGioia Tauro, (sa si xelayo), iguqulwe phantsi kwezilwandle, kodwa ePoland iba yinkathazo yesizwe.
Ngaphandle koko izimbungulu zikhangela isilwanyana, iigulane nezifo. Ngoku izinto ezinobungozi kakhulu zitshisa, ezifakwe nje apho. Kufuneka ukoyika ukuba apha nakhona I-Mafia ifanelwe impumlo yegolide , njengaseCalabria.
Kwakhona umyalezo okhoyo Zgierz yindawo yokuthuthwa kwezilwanyana zasendle apho yonke into igcinwa khona. Urhulumente wasePoland ulahlekelwe ukulawulwa kwesiza. EPoland, i-landfill ibizwa ngokuba "Trashcan yaseYurophu ".
Ukuthuthwa komhlaba kungekho mthethweni kwaye abahlali, nokuba benokutshisa iintsuku ezishisayo, abasakwazi ukuphefumula.
Ukulawulwa kwakubonakala kungenziwa kuphela, njengaye polsat ngoku i ingxelo.
Ibhizinisi lempilo, kwaye bambalwa abafumana ubutyebi. Nge-150 Yuro nganye ngetoni, ishishini lihlawulela umqhubi mthethweni.
Kuhlala kubonakala ukuba zeziphi iziphumo eziza kutsalwa xa umlilo uvaliwe.
NjengoNkulumbuso wasePoland Mateusz Morawiecki bhengezwe namhlanje ukuba inkonzo yasekhaya yasePoland, i-Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego ifiya mafia kwi "collar". EPoland, ngaphezu kwe-70 udoti olutshisayo lushiswe ezinyangeni zakutshanje. Umlilo waseZgierz awusayi kulawulwa, ngokutsho kwesebe lomlilo "ulwandle umlilo"Udale.
Iinqwelo zokuthuthwa komhlaba eYurophu
Inqaku langaphambiliILottery yohlobo olukhethekileyo
Inqaku elilandelayoI-Apollo Moon Missions - Yintoni eyenzekayo ngexesha lokuhlaliswa komhlaba?